Ungavumi bakwephulise umthetho omahlala ejahile emgwaqeni | IOL Isolezwe
Ungavumi bakwephulise umthetho omahlala ejahile emgwaqeni
Isolezwe / 28 June 2012, 1:49pm / STHEMBISO SHANGASE
SAPHINDA safika futhi lesosithunywa esithi mangicele sihlabe ama hazard ethu sibuyele eceleni komgwaqo ukuze sibhunge ngezezimoto sibonge ukuthi nawe usuze waliphenya leli khasi eliqukethe lamagalelo.
Esanamhlanje isimo sokushaya ama hazard singifice ngisashosholoza ngomgwaqo u N2 ngisuka ngase Mtubatuba ngilibangise ngase Thekwini ngishibilika ngomhuqa wensimbi yamajalimane esezingeni elibhekile impela ngize ngayigqokela ngizicuphile ngihlephulele ipanayi ekhanda angifune kuphazanyiswa, yikho nje ukuthi yisebusuku futhi nezulu seliyakhemezela akekho ozongibona.
Ngisayikhuza idla amagalani ngo 120 km/h insimb’yomlungu ngithi nhla esibukweni sekunemoto engipheshe ngemumva. Ingishaya nangamalambu sekungathi yimi osephutheni manje kanti ngihamba ngomgomo wejubane ofanele endaweni efanele.
Lemoto esibanga isicefe emva kwami ngiyibone iseza kude abanye abashayeli bebevele bayichezukele ngokuya kulomzila ophuzi wezimoto zezimo eziphuthumayo bese idlula kalula, phela lomgwaqo awukuvumeli ukuthi usike enye imoto futhi uwumzila ophambanayo ngakho kuze kusize khona ukuyidla emgqeni ophuzi uma ufuna ukudedela omunye umshayeli.
Ukungqengqa ngomugqa ophuzi akuvumelekile emthethweni wezokushayela kulelizwe. Lomgudu usuke ubekelwe izimoto zosizo oluphuthumayo njema ambulance izicisha mlilo nezinye hhayi izimoto ezisuke zichezukela ezinye. Ngenxa yokunengwa yilomshayeli ngigcine ngasithola isikhala nami ngayidla ngayo lomgudu, uma isidlula lemoto, hhabe kanti yi quantum le epita kanje, kaze kujahwephi ngoba phela umgomo wamatekisi uthi mawangeqi ku 100 km/h.
Ngenxa yokuthi lento ingicasulile ngibe sengithinta abangani bami bakwa Automobile Association ngababuza ukuthi siyawazi umthetho kabuyela eceleni udedele abajahile badlule ngakwesokudla ingabe nakho lokhu kuyinto esemthetwheni yini.
U AA uthi ngokomthetho wezokushayela u Regulation 298A omayelana ngokushayela kulomgudu ophuzi, kuyacaca ukuthi umthetho ubekelwe ukuthi ugcinwe. Bathi kuvumeleke ukuthi uye kulomgudu kuphela uma ufelwe yimoto noma kukhona okukuphoqa ukuthi yima okungaba ukuxinwa yisomo semvelo nokugula kwakho mshayeli noma umgibeli wakho. Bathi emigwaqeni engothela wayeka njengawo u N2 esasihamba ngawo akulokothwa kungqengqwe ngalolayini.
Bathi kodwa uma kuwukuthi yisemini umthetho uyakuvumela ukuthi ungayichezukela enye imoto ngokuya kuwo lomzila kodwa ebusuku noma liguqubele ngendlela yokuthi amehlo asequndekile awusakwazi ukubona ebangeni elingamamitha angaphezu kuka 150 ungalinge.
Phela kuthiwa ngeke ubone uma kunemoto emile ungathuka usuzithela phezu kwayo kade usathi uchezukela labomahlala bejahile basemgwaqeni. Usuyabona-ke ukuthi kwakungamele ngilichezukule leliya Quantum elase lingijoje ngemumva. Hawu sengikhumbula nenye indaba esiyibange nomunye umshayeli ebesixoxa naye ezinsukwini, yena uthi amaphoyisa omgwaqo angakubo phela ukuphelelwa wu petrol kuthelawayeka womgwaqo. Mina ngiyaphika ngithi angakubophela ukuphazamisa ukuhamba kwezimoto, uma upetrol ukuphelele phakathi nomgwaqo noma endaweni okungavumelekile ukuthi kumiwe kuyo.
Into engabanga bakubophe yingoba upetrol uyakwazi ukuwubona uma sewuphela emotweni ngakho uma ukuphelela esithubeni ubudedengu bakho mshayeli. Angiyingeni eyemoto engenaso isikali, ekalwa ngamehlo njengamanzi ophuthu.
Ngidedeleni ngishaye ama hazard ami ngibuyele emgwaqeni ngoba sebedlulile labo ntabakayikhonjwa kukude e Ndwedwe lapho ngiya khona njengoba ngiseMtubatuba nje.. masishayele ngokuhlonipha nokulandela yonke imithetho yomgwaqo kulelizwe size sihlangane ngesonto elizayo sisawadla anhlamvana kuyo lengosi yezezimoto.Yimi owenu